कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन ? त्रास होईन-सतर्क बनौं – Ramro Sandesh कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन ? त्रास होईन-सतर्क बनौं – Ramro Sandesh
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन ? त्रास होईन-सतर्क बनौं
बनेपा, २४ नोभेम्बर सन् २०२१ मा दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको पहिलो केस भेटिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको परीक्षण पश्चात् यसलाई भेरियन्ट अफ कन्सर्नको श्रेणीमा राखेको छ । सुरुवाती रिपोर्ट अनुसार ओमिक्रोन विभिन्न देशमा कहर निम्त्याइसकेको डेल्टा भेरियन्टभन्दा असाध्यै तीब्र रुपमा म्युटेशन गर्ने भेरियन्ट हो ।
हालसम्म ओमिक्रोनको ५० पटक म्युटेशन भइसकेको छ जसमध्ये ३० वटा त यसको स्पाइक प्रोटिनमा भएको छ । स्पाइक प्रोटिन मार्फत् नै कोरोना भाइरस मानिसको शरीरमा प्रवेश हुने गर्छ । यसको तुलनामा डेल्टाको स्पाइक प्रोटिनमा १८ वटा म्युटेशन भएको थियो । ओमिक्रोनको रिसेप्टर बाइन्डिङ डोमेनमा पनि १० म्युटेशन भइसकेको छ जबकी डेल्टा भेरियन्टमा २ वटा मात्रै म्युटेशन भएको थियो । रिसेप्टर बाइन्डिङ डोमेन भाइरसको त्यो हिस्सा हो जुन मानिसको शरीरको सेलमा सबैभन्दा पहिले सम्पर्कमा आउँछ ।
भ्याक्सिन बनाउने कम्पनी मोडर्न र थुप्रै विज्ञले ओमिक्रोन भेरियन्टमा हालको भ्याक्सिन प्रभावकारी नुहन सक्ने बताइसकेका छन् । यसबारे विभिन्न प्रकारको दाबी छ तर हालको व्यवस्था अन्तर्गत नै यसलाई रोक्ने काम गरिँदैछ । यद्यपि, थुप्रै कम्पनी यसको बुस्टर डोजका लागि पनि काम गरिरहेका छन् ।
हामीले यो बाट बच्न सावधानी अपनाउनुका साथै खोप अभियानलाई तीब्र्रता र परीक्षणको प्रक्रियालाई द्रूत गति दिएर यो भेरियन्ट बढ्नबाट रोक्न सकिने विज्ञ बताउँछन् । राम्रो तरिकाले मास्क लगाउनुका साथै सामाजिक दुरी, भीडभाडयुक्त स्थानबाट टाढै रहने र घर–अफिसमा राम्रोसँग भेन्टिलेशन बनाउनु यसबाट बच्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट तरिका हो । विज्ञका अनुसार कोरोना महामारी रोक्नका लागि हालका भ्याक्सिन प्रभावकारी छन् । ओमिक्रोन स्पाइक प्रोटिनमा असाध्यै धेरै म्युटेशन भइरहेको छ, यस्तोमा केही वैज्ञानिकले हालका भ्याक्सिन सायद नयाँ भेरियन्टमा प्रभावकारी नहोला भन्नेमा शंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञले केही नभएको स्थितिमा भ्याक्सिनले मानिसहरुलाई नराम्रो स्थितिमा जानबाट रोक्न सक्षम भएको बताउने गरेका छन् । अर्थात् खोप लगाएपछि मृत्युको खतरा निकै कम हुन्छ । त्यसैले सबैले खोप भने लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
दक्षिण अफ्रिकापछि नयाँ भेरियन्ट ३४ देशसम्म पुगिसकेको छ । यो रोगको गम्भीरता अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । त्यसैले यो कति खतरनाक हुनसक्छ यसबारे अहिले नै भन्न सकिन्नँ । भारतमा पनि यसकासंक्रमित भेटिइसकेका छन् त्यसैले यो नेपालमा पनि भित्रिने सम्भावना प्रचुर छ । उच्च सावधानी आवश्यक छ । –एजेन्सीको सहयोगमा (नव क्षितिज साप्ताहिकबाट)